Umanyolo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Umgodi womquba: ukukhetha indawo kanye nezinketho zokukhiqiza izakhiwo
Umquba ungumanyolo owenziwe ngenxa yokuqhekeka kwezidalwa eziphilayo ezingaphansi kwethonya lamagciwane. It ngcono yonke inhlabathi: ubumba kwenza kube more crumbly, sandy - bakwazi ukuqoqa umswakama. Ibhokisi lomquba we-slate ngezandla zakho. Kubalulekile ukuthola indawo esakhiweni lapho bengalimi khona noma besitshala noma yini, lapho kukhona inhlabathi engabhali.
Izici zokwenza umquba uzenze wena ngokwakho
Abalimi nabalimi bebelokhu befuna izindlela zokwandisa isivuno, ngoba ukusebenzisa imifino ephilayo kuyabiza kakhulu futhi kunzima ukuyithola. Amaminerali amaminerali ayengabizi, anika isivuno esikhulu, kodwa emva kwesikhathi abanikazi bezakhiwo bayaqaphela ukuthi inhlabathi iyawohloka: kuba lula, kunzima, kunesihlabathi futhi akugcini ndawonye.
Sitshala futhi sinakekele i-cactus ngendlela efanele
I-Cacti iyancipha kakhulu ngokukhula ekhaya. Lesi sitshalo asizithobeki ekunakekeleni futhi simelana nesomiso, ngisho noma ukhohlwa ukuwasebenzisa, i-cactus ngeke ihlaziye. Indlela yokukhetha i-cactus Kunezinhlobo ezimbalwa zezilimo ezitshaliwe kakhulu nezitsandwayo zezimo zegumbi.
Izinzuzo zokusebenzisa izithelo ze-bud bud "Ovary"
Umbuzo wendlela yokwandisa isivuno sezitshalo zensimu uhlala ubalulekile ezweni lanamuhla. Kubaluleke kakhulu izakhamuzi zasehlobo ezingenakuziqhayisa ngokuzala kwenhlabathi kanye nenani elanele lezinambuzane zokuvuna. Ngakho-ke, kulesi sihloko sizokhuluma ngomuthi okwazi ukugqugquzela ukwakhiwa kwe-ovary nokwandisa izivuno, okungukuthi, i-Ovary Yonke Yonke kanye nemiyalelo yokusetshenziswa kwayo.
I-superphosphate isetshenziswa kanjani kwezolimo
Wonke umuntu okhulisa izitshalo uyazi ukuthi ngaphandle kokugqoka, ngeke kube khona isitshalo, akukho izitshalo ezidliwayo, noma izitshalo zokuhlobisa. Izitshalo azinawo izakhamzimba ezanele emhlabathini, ngaphezu kwalokho, akuwona wonke umhlabathi onomsoco, ngakho-ke ngosizo lwezitshalo zomanyolo kudingeka zisize. Kulesi sihloko sizokhuluma nge-superphosphate, isicelo sayo kanye nezakhiwo.
Ukusetshenziswa kwe-potassium nitrate ensimini nasensimini
Izimila, ikakhulukazi labo abahlala emhlabathini ompofu, zidinga ukudla okunomsoco ukuze zikhule futhi zikhule ngendlela evamile. Ama-fertilizer ase-Potash asiza izitshalo kalula ukuba zibekezelele izinsuku ezinomile neziqhwayo; i-potassium iyadingeka ukuze izitshalo ziqhakaze lapho kuhluma. Elinye lala manyolo amaminerali yi-nitrate ye-potassium.
I-nitroammofosk: izici, ukwakheka, uhlelo lokusebenza
При выращивании любых сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев без подкормок не обойтись. Обильность урожаев зависит от целого ряда факторов, но питательность почвы находится далеко не на последнем месте. Omunye wemifuno ethandwa kakhulu futhi ephumelelayo yi-nitroammofoska - umanyolo owusizo kakhulu oqukethe izikhathi ezintathu eziwusizo: i-nitrogen, i-phosphorus ne-potassium.
Yonke insimu nomlimi balwazi ukuthi yiyiphi inhlabathi engumhlabathi, ukuthi kubaluleke kangakanani ukuvunwa okuphezulu kanye nokutshala okuluhlaza ensimini. Abaningi baze bahlanganyela ekukhiqizeni kwayo okuzimele. Kodwa-ke, ukuqala balimi nabalimi abaqondi njalo lokho okukhulunywa ngakho, kungani le nxenye yomhlabathi iyadingeka, ukuthi iyithinta nokuthi ungayithola kuphi.
Imiyalo yokusetshenziswa kwe-biohumus yamanzi
Ukuvuna okuhle nokuthuthukiswa okunempilo kwezitshalo nezitshalo kungenakwenzeka ngaphandle kokudla kwabo njalo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqala le nqubo isikhathi eside ngaphambi kokutshala (esiteji sokufaka imbewu) bese uqhubeka ngokuqhubekayo. Njengoba wazi, umquba umanyolo kanye nezidakamizwa, zombili lezi zinhlobo ziyadingeka ngokulinganayo nezitshalo.
Ubuchwepheshe bokusetshenziswa komanyolo ophilayo "Utamatisi wesignon"
Umanyolo we-Organic "I-Signor Tomato" eqinile i-BIO VITA ukubeka njenge-feed ekahle yamatamatisi nopelepele. Cabanga ngokubunjwa, izinzuzo zokusebenzisa kanye nendlela yokwenza kwalesi sidakamizwa. Ukwakhiwa, into esebenzayo kanye nefomu lokukhululwa "Utamatisi Omsayini" - Umquba ophilayo, onomuthi omkhulu wamakhemikhali: I-nitrogen, i-potassium ne-phosphorus ku-1: 4: 2.
Izici kanye nezinzuzo zezitshalo zomanyolo "Kemira" ("Fertika")
I-Kemira iyinhlanganisela yokumbiwa kwamaminerali equkethe ubunzima bama micro and macronutrients ngezinhlobo ezithile zezitshalo. Ububanzi besicelo bukhulu kakhulu: lusetshenziswa emasimini, amapaki kanye nomsebenzi wezolimo. Incazelo Umanyolo "Kemira" ("Fertika") uhlinzekwa ngesimo sezinto eziyinkimbinkimbi zemithombo yamaminerali.
Ukusetshenziswa komanyolo nitrophoska izitshalo ezihlukahlukene
Umanyolo we-nitrogen-phosphorus-potassium, okusetshenziselwa ukwandisa isivuno saso sonke isitshalo segadi nezitshalo. Namuhla sizoxoxa ngokuthandwa kwe-nitrophosphate kanye nezakhiwo zayo, kanye nokubhala phansi izinga lokusebenza kwezitshalo ezihlukahlukene. Ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nenhlobo yokukhulula Ngokwalokhu okushiwo ngenhla, kucacile ukuthi umanyolo we-nitrophosphate uqukethe izingxenye ezintathu eziyinhloko kwisilinganiso esilandelayo: i-nitrogen - 11%; i-phosphorus - i-10%; i-potassium - 11%.
Ukusetshenziswa komanyolo we-potassium chloride engadini
Ukuthuthukiswa okujwayelekile kwanoma yisiphi isitshalo, kudingeka izakhi ezintathu: i-nitrogen, i-phosphorus ne-potassium. I-nitrojeni inomthelela ekwandeni nasekukhuleni kwayo, i-phosphorus iyashesha ukuthuthukiswa, futhi i-potassium iyasiza izitshalo zasadini ukuze kunqobe ukucindezeleka ngesimo sezinkinga ezimbi, ukubhekana nezifo, ukuletha izitshalo eziphakeme nezokugcina isikhathi eside.
Umanyolo "Kalimagneziya": incazelo, ukwakheka, isicelo
Ukusetshenziswa okujwayelekile kwe "Kalimagnezii" ensimini noma engadini kunomthelela ekwandeni okukhulu kokuzala futhi ukwandise izici zekhwalithi yesitshalo. Ukutholakala kwangempela kwalesi sici kungenxa yezitshalo ze-chlorophobic kanye nomhlabathi ompofu, owonakele. Iyini umanyolo we-"Kalimagneziya", yiziphi izincomo abakhiqizi abazinikezela ngemiyalo, uma kudingekile nokuthi yiziphi izilinganiso ozisebenzisayo - uzothola izimpendulo zale mibuzo kusihloko sethu.
Ukusetshenziswa kwe-calcium nitrate njengomanyolo
I-nitric ka-calcium ngokuvamile isetshenziselwa kwezolimo njengendlela yokugqoka ephezulu yezitshalo zezimbali, imifino nezithelo zezitshalo. Kulesi sihloko sizoxoxa ngezimfanelo eziwusizo ze-calcium nitrate, kanye nokucabangela imfundo emfushane ekusetshenzisweni kwayo. I-calcium nitrate: ukwakheka komanyolo Ukwakhiwa komanyolo ku-calcium ngokuqondile, okungama-19% wezingqikithi zezinto.
Indlela yokufaka umanyolo "Gumat 7"?
Noma yisiphi isilima sifuna ukuthola isivuno esihle emibhedeni yabo, futhi akunandaba, lokhu kuyisakhiwo esincane se-dacha, namazambane namakhukhamba atshalwe kuso, noma insimu enkulu yokulima. Njengoba inhlabathi iphelile ngokuhamba kwesikhathi, akunakwenzeka ukukhula izitshalo ezinempilo ngaphandle kokugqoka okuphezulu. Kungenxa yale njongo ukuthi isetshenziswa umanyolo wemvelo "Gumat + 7 Iodine" esetshenziswa.